Porofo iray hafa koa fa Google Chrome no ratsy indrindra amin'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Porofo iray hafa koa fa Google Chrome no ratsy indrindra amin'ny Mac
Ignacio Sala | | Mac OS X, About us
Ao amin'ny Mac avy any Mac aho dia tsy ho hitanao mihitsy ny firesahanay tsara momba ny Google Chrome, tsy hoe satria avy amin'i Apple ity mpamorona ity na satria manana fialamboly manokana izahay, fa satria tsy fahombiazana sy fanjifana harena be loatra manolotra izy fa izay solosaina tantanan'ny macOS. Fantatr'i Google ity olana ity fa toa tsy miraharaha na tsy mahalala ny fanamboarana azy.
Porofo iray hafa ihany koa momba ny fanatsarana Google Chrome ho an'ny Mac, hitanay izany amin'ny olana amin'ny asa sy ny fahombiazany atolotray ao amin'ny Final Cut Pro X, raha toa ny fampiharana fanovana horonantsary ho an'ny macOS. Raha misokatra ny Chrome, ny Final Cut dia miaritra ny fahombiazany, mampiadana ny asany, mamaky ny application na manidy tsy ampoizina mihitsy aza.
Felipe Baez, talen'ny famoronana ary mpanorina ny Cre8ive Beast dia namoaka bitsika iray izay nanazavany fa i Chrome no olan'ny olana miasa izay ianjadian'ny mpampiasa sasany amin'ny Final Cut Pro X. Araka ny filazany dia hitany fa ilay mpitety tranonkala mihazakazaka, mampiasa tsy tapaka ny rafitra VideoToolBox ary manao ampihimamba ny fampiasana azy, misy fiantraikany ary miteraka fianjerana tsy ampoizina amin'ny fampiharana fanovana video an'i Apple.
Nanambara i Felipe fa ny Mac dia nandrakitra ny fampiasana 300% tamin'ny fikirakira azy rehefa nandeha ny Final Cut sy Google Chroe, ka nikatona tampoka ny fampiharana Apple. Talohan'ny nanokafany ny fampiharana dia nanidy Chrome izy teo aloha ary nanamarina izany nanjavona ilay fampiasana namboarina tamin'ity VideoToolBox ity ary ny Final Cut dia niasa indray tsy nisy olana.
Nilaza koa i Felipe fa nitombo 30% ny fotoana fandefasana horonantsary raha mandritra an'io dingana io dia manana Chrome misokatra ao aoriana izahay. Tsy misy isalasalana, ny toe-javatra misy an'i Chrome amin'ny Mac dia mampalahelo na aiza na aiza no itodihanao azy, fa ho an'ny mpampiasa maro dia mahafinaritra ny fampidirina atolotra azy amin'ny serivisy Google. Raha tsy afaka manala an'i Google ianao dia miezaha hanidy azy io isaky ny afaka manao izany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Porofo iray hafa koa fa Google Chrome no ratsy indrindra amin'ny Mac
Diego Osku Kozilek dia hoy izy:
$ 5000 pcs tsy afaka miaraka amin'ny JHA browser
Valiny tamin'i Diego Osku Kozilek
Victor Valerio Trejo dia hoy izy:
Raha ny amiko dia aleoko tsara kokoa noho Safari.
Mampalahelo fa tsy mahazaka azy tsara ny solosaina lafo vidy toy izany. Mazava fa ho an'ny fampiasana matihanina dia ny Windows no tsara indrindra ary ny Mac dia ampiasain'ny olon-tsotra.
Valiny tamin'i Victor Valerio Trejo
Albert aranda dia hoy izy:
Ho an'i Chrome raha manana Safari izy
Valiny tamin'i Albert Aranda
Jesus Lara dia hoy izy:
Ny zavatra lazain'izy ireo ato amin'ity lahatsoratra ity dia mahazatra an'ireo olona tsy mahay mamaky teny tsara na mandinika tsara ireo rindranasa ampiasainy. Tsy nahita na inona na inona ity lehilahy Felipe ity. Ny browser Google Chrome, na amin'ny Mac na Windows, dia mampiasa hafainganam-pandehan-tsary. Raha hanitsy amin'ny Final Cut Pro X ianao ary hampiasa Chrome, ny zavatra marina dia ny fanesorana ny fiakaran'ny sary amin'ireo safidin'ny fikirakirana. Toy ny hoe te-hanitsy amin'ny Final Cut Pro X ianao, ary manana rindranasa fanovana hafa mihazakazaka miaraka amin'izay toa ny Premiere na After Effects. Mampiasà Chrome aho miaraka amina fampandehanana sary haingana ary izay vao hitan'i Felipe "dia tsy mahazo ahy
Valio amin'i Jesús Lara
Lorena dia hoy izy:
Ny olana amin'ny tranga misy ahy Jesosy dia tsy manome ahy safidy hanokatra ny fikirakirana azy io, raha vantany vao manokatra Google Chrome aho dia mamaivay ny MacBook manontolo ary afaka miandry antsasak'adiny aho ary tsy mamirifiry ...
Valiny tamin'i Lorena
Chrome no tsara indrindra tamin'ny fampivoarana ny tranonkala, namela anay hampiasa fenitra tsara sy hanala ny enta-mavesatra nanananay tamin'ny Internet Explorer amin'ny Windows, tao amin'ny MacOS dia mbola tsy nanana olana mihitsy aho tamin'ny fampiasana azy niaraka tamin'ny programa hafa.
Marcos dia hoy izy:
Soa ihany, noheveriko fa io irery no zava-nitranga taminy ... ny fizahana amin'ny chrome miaraka amin'ny mac amin'ny tranokalan'ny gazety ara-panatanjahantena na vavahady misy doka google adsense na horonan-tsary maro dia helo ...
Fantaro ny olana ateraky ny Google Chrome, amiko dia ilaina ny mampiasa azy io amin'ny asako, izay takian'ny lehibeko amin'ny fampidirana serivisy rehetra araka ny nambaranao; Saingy nanana olana lehibe aho hatramin'ny nanombohan'ny Google ny fandefasana ny MacBook manontolo teo ho eo, tamin'ny fampiasako ny volako rehetra, noterena hamono azy aho satria tsy nisy lalana hafa hivoahana. Nesoriko ny rindranasa ary naverina sintomiko indray, nitohy ny olana ary ny zavatra mahatsiravina indrindra ary nianjera ny MacBook ary tsy nisy fomba handehanany avy eo amin'ny sakana ka hatrany am-piandohana. Natahotra be aho ka tsy sahy nametraka azy intsony fa ny lehibeko kosa manery ahy satria tsy ao amin'ny vondrona miasa ampiasainy amin'ny Google. Mihevitra ve ianao fa afaka manampy ahy hamaha izany olana izany? Feno fankasitrahana mandrakizay aho ... ❤️
Mamorona karazana infographic amin'ny Infrographics Maker amin'ny pejy, amidy amina euro 1 fotsiny
Na dia mety ho toa izany aza, ny Mac Pro vaovao dia tsy miasa ho toy ny grater fromazy, ary manamafy izany ity horonantsary ity